खुसिको खबर भारत बाट १० लाख डोज काेराेना भ्याक्सिन लिएर काठमाडौं आइपुग्याे गाडी ! – Sandesh Press
खुसिको खबर भारत बाट १० लाख डोज काेराेना भ्याक्सिन लिएर काठमाडौं आइपुग्याे गाडी !
काठमाडौं, ८ माघ । भारत सरकारले अनुदान सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन लिएर एयर इन्डिया काठमाडौं आइपुग्नेकाे छ । भारतले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराएकाे हाे । दिल्लीबाट उडेकाे एयर इन्डियाकाे जहाज करिब पाउने १२ बजे काठमाडाैं आइपुगेकाे हाे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खोप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । खोपलाई टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा भण्डारण गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रत्येक प्रदेशको भण्डारण केन्द्रमा खोप पठाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले ७७ जिल्लामा एकसाथै खोप अभियान सुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ
भारत सरकारले अनुदान सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन लिएर एयर इन्डिया काठमाडौं आइपुग्नेकाे छ । भारतले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराएकाे हाे । दिल्लीबाट उडेकाे एयर इन्डियाकाे जहाज करिब पाउने १२ बजे काठमाडाैं आइपुगेकाे हाे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खोप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । खोपलाई टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा भण्डारण गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रत्येक प्रदेशको भण्डारण केन्द्रमा खोप पठाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले ७७ जिल्लामा एकसाथै खोप अभियान सुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ
Prevआफ्नो छोरी सुस्मिताको यादमा आमाको याे मनै छुने टिकटक भिडियाेले सबैकाे मन रुवायाे (हेर्नुहोस् भिडियोमा)
Nextसाह्रै दु’खद खबर: मलेशियाका अस्पतालमा नेपा’लीका ३५ श’व !
बस र ट्रक आपस ठोक्किदा ११ जनाको मृ’त्यु ७ घा इते
बर्दियामा जब बिहे गरेर लागेकै रात श्रीमतीको मृत्यु भयो